ဒေါက်တာသန်းထွန်း – ဆရာအိုရဲ့ဆုံးမစာ | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း)ေ ဖဖော်ဝါရီ ၀၈၊ ၂၀၁၅
ဆရာအိုတွေရဲ့ ဆုံးမစာလိုချင်တယ် ဆိုလို့
ခုတော့ သုတေသန ဆိတ်သုဉ်းပြီ
တက္ကသိုလ် ဆရာတွေ ပါမောက္ခတွေ
နားချိန် အားချိန် မရ
ဒါတွေ ငါမြင် ငါသိ
တက္ကသိုလ် နင်တို့ မဖျက်
မျှဝေသူ ကိုဘိုဘိုလန်းစင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2 Responses to ဒေါက်တာသန်းထွန်း – ဆရာအိုရဲ့ဆုံးမစာ
Ba Ba Gyi on February 8, 2015 at 7:24 pm
ဒေါက်တာသန်းထွန်းလက်ရေးနဲ့ရေးခဲ့တာက ကင်းဆော်ပါဗျာ။ ကင်းဆောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာစာရောစကားမှာပါ “ကင်းစောင့်” သာရှိပါတယ်။ “ကင်းဆောင့်”မရှိပါဘူး။ “ကင်း” ကိုလည်း ဘယ်သူကမှ “ဆောင့်” မယ်မထင်ပါဘူး။
nyeinchanaye81 on February 9, 2015 at 12:06 am
Yeah, it’s my mistake. I typed it wrongly. I noticed it too late. Thanks for correcting us.